काखीमुनी सानो प्वाल पारेर ओपन हर्ट सर्जरी सफल-Brtnepal.com
Published on September 16, 2016 at 5:14 pm
नेपालमै पहिलोपटक गर्न पाएकोमा निकै खुसी छु ।’ डा. अनिल भट्टराई, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ
इटालीको पादुभा विश्वविद्यालयमा ५ वर्ष बसेर बिद्यावारीधी र १० वर्ष युरोप बसाँईपछि मलाई आफ्नै देश फर्केर स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने सोच थियो । उपचारको लागि कम्तीमा एउटा भए पनि नयाँ प्रविधि भित्र्याउन पाए हुन्थ्यो भनेर सोचिरहन्थे । कुनै पनि कुराले समय लिन्छ भने झैँ त्यो पुरा गर्न केही समय लाग्यो ।
आफैँले अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय जाने तयारी गर्दै थिएँ । त्यहीबेला धादिङ्गका भरत कार्कीसंग भेट भयो । उनकी १८ वर्षीया छोरी श्रीषाको मुटुमा प्वाल परेको थियो र श्वासप्रश्वासमा समस्या बढेको थियो । भरतजीको चाहना कुनैपनि दाग नदेखिने गरी सर्जरी गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो । मैले काखीमुनीबाट सानो प्वाल बनाए मुटुको सर्जरी गर्न सकिने बताँए । तर नेपालमा अहिलेसम्म नभएको सर्जरी गर्न मसँग समय थिएन । मैले उनीहरूलाई पहिलोपटक भएकोले जोखिम हुने जानकारी गराएँ । उनीहरूलाई सबैकुरा यर्थाथ बताएर युरोपबाट फर्केपछि सर्जरी गर्ने बताँए । उनीहरूले पनि माने ।
इटालीको पादुभा विश्वविद्यालयमा काखीमुनी सानो प्वाल बनाएर ओपन हर्ट सर्जरी भर्खर सुरु भएको थियो । मैले त्यहाँ तीन वटा सर्जरीमा सहभागी भएँ र धेरै कुराहरू सिके । पछि मलाई नेपाल फर्केपछि श्रीषा कार्कीको काखी मुनि सानो प्वाल पारेर मुटुको सर्जरी गर्न धेरै सजिलो भयो र सफल पनि भएँ ।
के हो ओपन हर्ट सर्जरी ?
साधारण भाषामा यो मुटुको शल्यक्रिया हो । हर्ट लङ्गस मेसिनको सहायताले मुटुको शल्यक्रिया गरिने प्रक्रियानै ओपन हर्ट सर्जरी हो । हर्ट लङ्गस मेसिन भनेको शरीरमा मुटु र फोक्सोले गर्ने काम कृत्रिम मेसिनले गर्ने हो । ओपन हर्ट सर्जरीमा मुटुलाई बन्द गनुपर्ने हुन्छ । मुटुले काम नगरेको समयमा मेशिनले मुटु र फोक्सोको काम गर्दछ । त्यतिखेर मुटुको प्वाल टाल्ने वा भल्भ फेर्ने काम गरिन्छ । यो मेशिनले मुटुले गर्ने तीन वटा काम गर्दछ । पहिलो रगतको पम्प गर्दछ, दोस्रो रगतको प्रवाह र तेस्रो काम भनेको श्वासप्रशवास हो ।
सन् १९५१ तिर यो मेशिनको आविष्कार भएको थियो भने १९०५२ बाट ओपन हर्ट सर्जरीको सुरुवात भएको हो । नेपालमा भने ओपन हर्ट सर्जरी सन् १९९० को दशकमा अष्ट्रेलियन डक्टरहरु आएर गरेको भन्ने कुरा छ । तर नेपालमै सन् २००० बाट वीर अस्पताल र शिक्षण अस्पतालले ओपन हर्ट सर्जरी सुरु गरेको होे । तर काखीमुनी सानो प्वाल पारेर गरिएको ओपन हर्ट सर्जरी भने पहिलोपटक ग्रिनसिटि अस्पताालबाट मैले नै सुरु गरेको हुँ ।
सामान्यतया ओपन हर्ट सर्जरी दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो ट्र्याडिस्नल ओपन हर्ट सर्जरी र अर्को मिनिमल इन्भ्याजिभ सर्जरी हुन्छन् । यी दुवै नेपालमा चलनचल्तिमा छन् तर मैले सुरु गरेको सर्जरीलाई मिनिमल एक्जिलारी इन्सिजन अर्थात् काखिमुनी प्वाल पारेर गरिने ओपन हर्ट सर्जरी हो । काखीमुनीबाट सानो प्वाल पारी युरोप, अमेरिकामा पनि भर्खरै मात्रै सुरु भएको अप्रेशन नेपालमा पनि पहिलो पटक आफुुले सफलतापुर्बक सम्पन्न गरेकोमा अत्यन्तै खुसीको अनुभव गरेको छु ।
किन काखिमुनीबाटै गर्ने ?
अन्य मुटुको सर्जरी जस्तै यो काखीमुनीबाट सानो प्वाल पारेर गरिने सर्जरीमा पनि जोखिम हुन्छ । साधारणतया एक देखि ५ प्रतिशतसम्म बिरामीको मृत्यु हुन पनि सक्छ । यो सर्जरी गरिसकेपछि मस्तिष्कघात हुने, फोक्सो तथा मिर्गौलामा समस्या देखिने र निमोनिया हुने सम्भावना पनि हुन्छ । तर अन्य तरिका चिरेर गरिने ओपन हर्ट सर्जरीको तुलनामा काखीमुनीबाट सानो प्वाल पारेर मुटुको शल्यक्रिया गर्दा बिरामीको तर्फबाट हेर्ने हो भने धेरै फाइदा छ ।
मेलै गरेको सर्जरी छोटो समयमै बिरामी स्वस्थ्य भएर घर फर्कन सक्छन् । पहिलो पटक सर्जरी गर्ने श्रीषा कार्की चार दिनमै स्वस्थ भएर घर फर्किन सफल भइन् । काखीबाट भएको ओपन हर्ट र्सजरी पछि उनको मुटुमा रहेको समस्या समाधान भएको छ । यो सर्जरीमा ठुलो प्वाल नपारी गरिने हुँदा पछि गएर दाग देखिने, औषधी खाइरहनु पर्ने हुँदैन, सर्जरी पछि संक्रमण हुने र घाउ हुने समस्या आउँदैन । साथै यसमा उच्चतम प्रविधि प्रयोग हुने भएकोले यो सेवा अर्न्तराष्ट्रिय स्तरको छ ।
खर्चका हिसाबले नेपालमा काखीमुनीबाट सानो प्वाल पारी गरिने ओपन हार्ट सर्जरी निकै सस्तो हो । भारतमै यसको सम्पूर्ण खर्च ८ लाख भन्दा बढी लाग्छ तर हामीले पहिलोपटक सर्जरी गर्दा तीन देखि चार लाख भनेका थियौँ त्यो पनि पछि अस्पताल र सेभ द हर्ट भन्ने संस्था मिलेर निःशुल्क गरीदियो ।
सर्जरीको खर्च बिरामीको मुटुमा भएको समस्यामा पनि भर पर्छ । कसैको मुटुमा प्वालमात्रै टाल्ने हो भने सस्तो पर्न आयो तर मुटुकै भल्भ फेर्नुपर्यो भने लागत बढ्न सक्छ ।
अन्त्यमा नेपाल मुटुको उपचारमा निकै अघि बढिसकेको छ । युरोप, अमेरिकामा हुने मुटुको उपचार अब नेपालमै सम्भव भएको छ । नेपालमा मुटुको प्रत्यारोपण र कृत्रिम मुटु राख्न सकिदैन ती बाहेक सबै उपचार सम्भव भएकोले सबैलाई मुटु सम्बन्धी उपचार नेपालमै गर्न आग्रह गर्दछु । यी सबै म किन भनिरहेको छु भने जहाँ गएपनि आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले जुन देश गएर उपचार गरेपनि दुई वटा कुरा मात्रै गर्न सक्छ । पहिलो बिरामीको आयु लामो बनाउने र अर्को बिरामीको जीवन सहज बनाइदिने ।
जाँदा जाँदै सबै मुटु स्वस्थ राख्ने पाँच सुझाव दिन चाहान्छु ।
१. नियमित व्यायम गनुहोस्
२. खानपानमा ध्यान दिनुहोुस्
३. धुमपान र मद्यपानबाट टाढै रहनुस्
४. मोटोपना नियन्त्रण गर्नुहोस्
५. मधुमेह र उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्नुहोस्
केही जिज्ञासा भएमा डा. भट्टराईलाई anbh10000@ yahoo.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।
डा.भट्टराईसंग दिनेश लामिछानेले गरेको कुराकानीमा आधारित